Codadka Nabadda: Helitaanka Daraasadda Dhageysiga Dhageysiga - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Codadka Nabadda (V4P) ayaa dhowaan sameeyay daraasad dhagaysi si loo cabbiro cabirka iyo caadooyinka dhagaystayaasha dhagaystayaasha 53 idaacadood oo mudnaanta la leh dalalka Niger, Burkina Faso, Chad, Cameroon, iyo Mali. Ka akhriso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan V4P halkan.
Qeybta ugu weyn ee mashruucu waa in la sameeyo "iskaashi mudnaanta leh" oo leh 53 raadiyeyaal ganacsi iyo idaacado ganacsi oo ku kala yaal waddamada V4P. Idaacadahaani waxay gaarayaan in kabadan 3 milyan dhagaystayaal maalinle ah waana shuraako muhiim u ah V4P kuwaaso soosaaraya kuna faafinaya sumcad la taaban karo oo saameyn ku leh ka hortagga xagjirnimada qalalaasaha ah (CVE) iyo barnaamijka dabeecadda oo wax ka beddelaya barnaamijyada raadiyaha ee aagagga mudnaanta leh. V4P waxay ka shaqaysaa sidii loo xoojin lahaa awoodaha farsamooyinka iyo maareynta ee saldhigyada mudnaanta leh si loo soo saaro loona baahiyo si hufan loona noqdo mid isku filan.
Daraasaddan waxaa ku jiray afar ujeedo oo gaar ah:
Go'aamiso tirada dhagaystayaasha mid kasta oo ka mid ah 4 idaacadood oo ay wada shaqeeyaan V53P;
Aqoonsado qaababka ay dadku u dhagaystaan ​​- raadiyaha shaqsiyeed, taleefanka gacanta, gawaarida, ama goob jaaliyadeed;
Go'aamiyaan caadooyinka ay ka mid yihiin saacadaha ugu sarreeya dalka iyo waqtiga celcelis ahaan ku qaatay dhageysiga maalin kasta;
Qiimee heerka aqoonta iyo doorbidayaasha dhagaystayaasha, oo ay ku jiraan aqoon u lahaanshaha barnaamijyada, noocyada la doorbido ee nuxurka, iyo mowduucyada la fahmay lana adeegsaday.
Daraasadu waxay bixisaa macluumaad qiimo leh oo horumariya fahamkeena ku saabsan sida loo qaabeeyo wadahadalada heerka bulshada ee mawduucyada la xiriira CVE. Dhageysteyaasha ayaa si xamaasad leh u adeegsada isla markaana ku howlan waxyaabaha ay soo saareen V4P iyo saldhigyada iskaashiga leh. Hoos ka akhriso faahfaahin dheeraad ah.
Soo dejiso soo koob halkan
Halkan ka soo dejiso warbixin daraasad oo dhammaystiran